Momba anay - Shanghai H&H Hotmelt Adhesives Co., Ltd.
Mombamomba ny orinasa H&H
Jiangsu Hehe New Materials Co., Ltd. Sampana Shanghai dia fikambanana naorina tao Shanghai ho foiben'ny marketing an'i Hehe New Materials, natokana ho an'ny fampandrosoana sy ny fikojakojana ny tambajotra varotra manerantany ny vokatra Hehe. Ny marika "Hehe Hot Melt Adhesive" dia natsangana tamim-pitandremana sy notehirizin'ny ekipa efa folo taona mahery izao ary nanjary marika adhesive melt mafana manana laza malaza sy malaza eo amin'ny indostria. Izy io dia nanangana toby famokarana sy fanodinana maherin'ny 10.000 metatra toradroa ao amin'ny Jiangsu Qidong Binhai Industrial Park sy Hehe; manana sampana na mitazona orinasa any Wenzhou, Hangzhou, Fujian ary Guangdong izy ity mba hanomezana fanohanana haingana kokoa ny rindranasan-tsolika mafana ataon'ireo mpanjifa. Amin'ny maha orinasa teknolojia avo lenta ny fampidirana ny R&D, ny famokarana sy ny varotra, ary ny fampidirana ireo loharanon-karena R&D manerantany amin'ny sehatry ny adhesives mafana, dia mifanaraka amin'ny firoboroboan'ny fampiharana adhesive melt mafana amin'ny sehatra isan-karazany ary mamorona adhesives miempo hafakely sy mampiavaka azy. Ny sehatry ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny membrane dia namorona rafitra fanavaozana ny teknolojia "mitarika any an-toerana, mifangaro amin'ny sehatra iraisam-pirenena" manambatra ny famokarana, ny fianarana ary ny fikarohana, ary izy no lohalaharana teo amin'ny tsena tamin'ny fampiharana sy ny fanitarana ireo horonantsary mametaka mafana.
Ny vokatra mihetsiketsika mametaka horonantsary manana ny toerany eo amin'ny tsena eo amin'ny sehatry ny kiraro famatorana lakaoly mafana, fitaovana elektronika, famokarana fanamiana miaramila, fitaovana haingon-trano, atin'akanjo tsy misy marika ary sehatra hafa, manompo an-trano sy vahiny fanta-daza. marika sy vokatra isan-karazany Afaka manolo ireo vokatra mitovy nohafarana. Fahombiazana lehibe no natao tamin'ny fampivoarana sy ny fampiharana ny fanoloana glu nentin-drazana tsy amin'ny tontolo iainana, izay hanatsara be ny fiantraikan'ny fitaovana mitambatra isan-karazany amin'ny tontolon'ny fahasalamana sy ny tontolo iainana.
Ny zavatra amidinay dia tsy ny vokatra ihany fa mba hamoronana sanda fanampiny sy serivisy fanampiny ho an'ny mpanjifa sy ny fiaraha-monina.
Ny orinasa dia nandalo ny fanamarinana rafitra fitantanana kalitao SGS ISO9001, ary ny vokatra dia nandalo ny fanamarinana fiarovana ny tontolo iainana. Hehe ny olona dia nifikitra tamin'ny filozofian'ny orinasa "mpanjifa aloha, toy ny mandeha ambony ranomandry manify", miaraka amin'ny iraka fampandrosoana"mampihatra sy mampivelatra ny haitao mafana mifamatotra mba hahatonga ny fiainana ho salama sy tsara kokoa", manavao tsy tapaka ary mitombo, takiana sy fanaraha-maso kalitao henjana, dia hehe Miasa mafy hatrany ny marika mba ho lasa marika adhesive mafana miovaova malaza manerantany.